I-84, iCharing Cross Road: Uphononongo kunye neNqaku elinomdla -Ikaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> I-84, iCharing Cross Road
I-84, iCharing Cross Road
I-84 Charing Cross Road (yithengeyincwadi yabathandi beencwadi. Kulawo amadala uwafumana kwiivenkile ezindala zeencwadi kwaye awunakulinga nokuba ungabamba kodwa kukho into ekubizayo. Icala elimnyama lomkhosi wenkululeko. Ibonisa imbalelwano yombhali wayo, uHelene Hanff, enevenkile encinci yaseLondon iMarks & CO ebekwe kuloo dilesi. Uninzi lweeleta ezithunyelwe kumsebenzi wevenkile kaFrank Doel.
Ngobuntu obahluke ngokupheleleyo, isenza sikwazi ukubona amakhadi kunye nexesha lokuba ubudlelwane phakathi kwezi zinto zimbini buguquka njani.
Ileta yokuqala yathunyelwa ngo-Okthobha u-1949, osibeka kanye emva kwexesha lasemva kwemfazwe kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kwaye isibonisa isixeko saseLondon esineengxaki zonikezelo kunye nokusilela okuninzi. Kubonakala ngokucacileyo kwincoko noFrank nakuko konke ukuba bayazixabisa izipho zokutya abazifumanayo.
Ayisiyo inoveli, kodwa yincwadi yohlobo lwe-epistolary.
Nangona ndihlala ndisiya ezincwadini ngeengcebiso ezininzi, ubukhulu becala zivela kwi-Intanethi, ngeli xesha kwahlukile. Ndahamba ndaya kwithala leencwadi kwaye laliselishefini yeencwadi ezinconywayo okanye ezicetyiswayo, mhlawumbi zibonakalisiwe Ukuyibona kwatsala umdla wam. Ndingenise iiGoodreads kunye nabantu endibaziyo apho ndihlala ndivuma kakhulu kwizinto endizithandayo. Ke ndiyithathile ngaphandle kwamathandabuzo.
Ndiyithandile le ncwadi, ngakumbi kuba bendingakhange ndikhangele nantoni na kwaye bendingalindelanga kwanto kuyo. Kuluyolo ukuzicwilisa ndikhangela iincwadi ezingaqhelekanga kunye nezinto ezithandayo kunye neminqweno yombhali.
Udliwanondlebe noHelen Hanff ngo-1981
Ngaba uyazi ukuba kukho imovie esekwe kwincwadi ebizwa «Ileta yokugqibela»? Umboniso bhanyabhanya uvela ngo-1987 kunye neenkwenkwezi u-Anthony Hopkins.
Kukho umdlalo odlalwa ngokwenene.
Ixesha lokophula ezothando
Umfanekiso eliqala ngawo inqaku liyahambelana nendawo yokugcina iincwadi iMarks & Co njengoko unokucinga kwi-84, iCharing Cross Road. Ukuthanda ukwazi kunye netekhnoloji entsha indikhokele ukuba ndindwendwele iStreet View yeeMaphu zikaGoogle kwaye ndibone ukuba kunjani ngoku, kwaye endikufumanisileyo kuqhekeze konke ukuthandana okwenziwe bubuso obudala obabubhaliwe phakathi komfundi eNew York nakwivenkile ethengisa iincwadi eLondon. Into namhlanje yokushiya ii-imeyile kunye nobudala bedijithali ndiyathandabuza ukuba iyakuphindwa.
Namhlanje sinokufumana iMac Donalds. Andazi ukuba oku bekuyimfuneko ngenqaku.
Jonga kakuhle ezi zithombe zimbini, kwaye ubone ukuba umthi osemnyango ukhule njani
Iincwadi ezingama-35 ezikhankanywe nguHelene Hanff kuma-84, iCharing Cross Road
Ngumnikelo kwiincwadi kunye noncwadi. Igcwalisa loo mnqweno wokuba sonke kufuneka sibone ukuba abanye abantu bayafunda, kunye nefestile endala yevenkile yeencwadi, iincwadi ezindala kunye ne-incunabula. Ndikonwabele kakhulu ukubona imiqulu endiyi-odoleyo kwaye (uninzi) ndingazange ndeva ngayo.
Ndiqokelele zonke iincwadi ezikhankanyiweyo kumthamo weeleta. Ndiyathanda ukuba nayo, kukho ezimbalwa ndingathanda ukujonga. Ndiyanqwena u umfundi, uyifumana iluncedo.
Kulawo akhankanywe kuluhlu, ndinomdla kakhulu malunga nezincoko zikaHazlitt, uRobert Louis Stevenson kunye noLeigh Hunt, eyunivesithi yaseNewman efanelekileyo esele ndibeke iliso kwiSpanish kwaye ndiqinisekile ukuba ndifuna into kaJohn. UHenry.
Izincoko ezikhethiweyo zikaHazlitt
IVirginibus Puerisque kunye nezinye izincoko zikaRobert Louis Stevenson
Izincoko zikaLeigh Hunt
Latin Latin (Latin Vulgate) (endaweni yebhayibhile bakunika iTestamente eNtsha ngesiLatin kunye neTestamente eNtsha ngesiGrike)
Iingxoxo eziQikelelwayo zeLandor (Umqulu II wezoBomi kunye neMisebenzi kaWalter Savage Landor enencoko phakathi kweAesop neRhodope)
I-Oxford Anthology yesiNgesi Imibongo
omnye uJohn henry
UWyatt okanye uJohnson bathanda incwadi yemibongo, akukho Keats okanye uShelley
Ikholeji yaseNewman's Dream
I-Anthology ye-Q (Uyicaphula ngale ndlela nangona ndingazi ukuba ngowuphi umsebenzi abhekisa kuwo)
Idayari kaSam Pepys
Amaphepha kaSir Roger de Coverley
Isincoko sikaChesterfield neGoldsmith
Izincoko zesiNgesi zeNkulungwane yama-XNUMX (iqulethe iHilare Belloc)
Ubomi bukaWalton (uMgcini ogqibeleleyo)
Ikratshi kunye nokuCalucalula nguJane Austen
I-Loeb Classics yaseHorace, iSappho kunye neCatullus
Ukuphononongwa kweqonga likaShaw kunye nokuphononongwa komculo
I-Anthology yomthandi wencwadi
UTristram Shandy (uyayibiza ngegama kodwa andiqinisekanga ukuba lushicilelo okanye isihloko)
Uhambo lukaDe Tocqueville oluya eMelika
Iingxoxo ezine zikaPlato
Umoya kwii-Willows nguKenneth Grahame
Izincoko zikaElia de Lamb
Isichazi-magama esifutshane seOxford
Umdlalo kaJohnson kuShakespeare
Iintsomi zikaChaucer's Canterbury
Gcwalisa iMibongo kunye neProse ekhethiweyo nguJohn Donne kunye neMibongo epheleleyo kaWilliam Blake
Iintshumayelo ezigqibeleleyo zikaJohn Donne
Imbalelwano phakathi kukaBernard Shaw no-Ellen Terry
Izikhumbuzo zeDuc de Saint-Simon
Umfundi oQhelekileyo kaVirginia Woolf
Idayari yeNenekazi leLizwe, ngu-EM Delafield
U-Beowulf (ongaceli ukuba afunde, kodwa uthetha ngokubandlulula ngenxa yomhlobo wakhe)
Indlu ayilokhaya, nguPolly Adler
Umculo weVocal Music Sheet Music
Uthando lukaBach ngokwe-Saint Matthew
Ngaba unomdla malunga nawuphi na ngokukodwa?
BioCoder, imagazini malunga ne-DIY Bio
Indawo kaRay Bradbury
1 Ixesha lokophula ezothando
2 Iincwadi ezingama-35 ezikhankanywe nguHelene Hanff kuma-84, iCharing Cross Road
2.1 Iincwadi ezikhankanyiweyo